Minamato Pamusoro pekuve Mukati meChitungwiza kana Mutirongo Muhope | MINYENGETERO MARI
Svondo, Nyamavhuvhu 1, 2021
musha Pfungwa dzemunamato Minamato Pamusoro pekuve Mukati meChitungwiza kana Mutirongo Muhope
Minamato Pamusoro pekuve Mukati meChitungwiza kana Mutirongo Muhope
Isaya 49:24 Ko chingapambwa chinotorwa kubva kune vane simba here, kana kuti mutapwa unodzikunurwa? Asi zvanzi naJehovha, Kunyange vatapwa veanesimba vachatorerwa, zvakapambwa zveanotyisa zvichadzikunurwa, nekuti ini ndichapokana naiye anokakavara newe, uye ndichaponesa vana vako.
Nhasi tichave tichiita minamato yekupokana nekuve mugeji kana jeri muchiroto. Iyi minamato ndeye vanhu vanogara vachizviona vari mukaseji, mujeri kana muchitokisi chemapurisa muchiroto. Vamwe vanogona zvakare kuzviona vakasungwa pamuti kana kungosungirirwa muhope. Uku hakusi kurota kwakanaka zvachose. Kuzviona uri mugeji kana mujeri zvinoreva kusungwa pamweya, zvinoreva kuti uri nhapwa ye masimba erima. Kana uchinge wave muchikamu ichi, haugone kugadzira hupenyu, unowana ruzivo kurega kunotanga, zvipingamupinyi, kusangana, kukanganisa uye mamwe marudzi ese ezvakaipa anoramba achikuwira. Asi izvo hazvizove chikamu chako muzita raJesu. Nhau dzakanaka ndedzekuti, pane nzira yekubvisa pane zvese zvinonetsa. Mune ino post, tichava takatarisa nzira yekusiyana kubva kuutapwa hwaSatani.
Maitiro Ekusiyana Neshoma Yemweya
Minamato ndiyo kiyi yekuvasunga strongman. Kana iwe uchida kusimuka kubva pamisungo yerima, iwe unofanirwa kuve uri hofori yemunamato. Kana nguva yese yaunorara, iwe uchirota zvako uri mutirongo, unofanira kusimuka, uye uchiramba hope, usazvigamuchira, urambe uye urambe uchienda kuhondo yehondo paartari yeminamato. Dhiabhori haakuregerei muchienda, nekuti makakumbira zvakanaka, asi Achakutenderai kuenda nekuti mune simba pamusoro pake. Satan anoremekedza simba chete, iye haaruremekedzi simba. Iyi minamato yekupesana nekuve mune cage kana jeri muchiroto, ichaisa munzira yekununurwa kwako. Sezvo iwe uchinamata iyi minamato nhasi, mikova yehusungwa yega yega ichavhurwa, zvichitevera kurongeka kwaPaul naSirasi muzita raJesu.
1. O Ishe, rega mweya unotiza kubva kuchivi upinze hupenyu hwangu.
2. Ini ndinotora kodzero dzangu dzose ikozvino, muzita raJesu.
3. Mweya Mutsvene, ndipeiwo tariso yekubwinya kwenyu, muzita raJesu.
4.Mweya Mutsvene, ndiraramise, muzita raJesu.
5. Ndinozvisunungura kubva muhusungwa hwakagarwa nhaka hunokanganisa basa rangu, muzita raJesu.
6. O Ishe, tuma demo rako remoto kune hwaro hwehupenyu hwangu uye paradza zvese zvakashata zvakasima, uchirwisa kubudirira kwebasa rangu.
7. Ropa raJesu, svina zvese zvakagarwa nasatani kubva muhurongwa hwangu, muzita raJesu.
8. Vese masimba masimba, akasunganidzwa nehupenyu hwangu, ngaafe mitezo, muzita raJesu.
9. Chero tsvimbo yevakaipa, inondimukira yakanangana nebasa rangu, ipai simba nekuda kwangu, muzita raJesu.
10. Ndinodzima mhedzisiro yezita ripi neripi rakaipa renzvimbo, rakanamatira munhu wangu, muzita raJesu.
11. Ini ndinozvisunungura pamberi pehushe hwakaipa nekutonga, muzita raJesu.
12. Kufunga kese kwakaipa kupesana nebasa rangu, raoma kubva kunobva, muzita raJesu.
13. O Ishe, regai zano rekuparadza revavengi rakanangana nebasa rangu riputirwe muzviso zvavo, muzita raJesu.
14. O Ishe, chirevo changu chekuseka ngachishandurwe chive chishamiso, muzita raJesu.
15. masimba ese, anotsigira zvisarudzo zvakaipa pamusoro pangu, anyadziswe, muzita raJesu.
16. Iwe murume akasindimara akasindimara, akapihwa basa neni uye nebasa rangu, wira pasi woshaya simba, muzita raJesu.
17. Aiwa, Ishe, ngavanyadzise simba remweya yese yaKora, naDhatani naAbhiramu, vachipesana neni, vapazwe munzira, muzita raJesu.
18. Wese mweya waBharamu, waakashanda kuti andituke, unowira pasi pechirongwa chaBharami, muzita raJesu.
19. Wese mweya waSanibharati naTobhia, unoronga kundiitira zvakaipa gamuchira mabwe emoto, muzita raJesu.
20. Wese mweya weEgypt, unodonha uchitevera waFarao, muzita raJesu.
21. Mweya umwe neumwe waHerodhi, nyadziswa, muzita raJesu.
22. Wese mweya weGoriyati, gamuchira mabwe emoto, muzita raJesu.
23. Wese mweya waFarao, wira mugungwa rako dzvuku, muzita raJesu.
24. Zvese satanic manipulations, ane chinangwa chekushandura destiny yangu, nyadziswa, muzita raJesu.
25. Varairidzi vese vasingabatsiri zvekunaka kwangu, vanyarare, muzita raJesu.
26. Meso ese akaipa anotarisisa, akagadzirirwa kupokana neni nebasa rangu, ive mapofu, muzita raJesu.
27. Ese madhimoni anodzosera madhimoni, akaisirwa kukanganisa kufambira mberi kwebasa rangu, kubikwa, muzita raJesu.
28. Chero hope dzakaipa dzinoitwa kuti dzindikuvadze pamwe nebasa rangu, dzinoshandurwa kuita hope dzakafa, muzita raJesu.
29. Zvombo zvese, nemidziyo yevadzvinyiriri nevatambudzi, ngazvishayiswe simba, muzita raJesu.
30. Moto waMwari, paradza simba rinoshanda chero mota yemweya, uchirwisa ini nebasa rangu, muzita raJesu.
31. Zano rose rakaipa, rakapiwa pamusoro peshungu dzangu; kuparara nekuparara, muzita raJesu.
32. O Ishe, regai mhepo, zuva uye mwedzi zvimire zvinopesana nekuvapo kwese kwemadhimoni, vachimukira kupokana nebasa rangu munzvimbo yangu, muzita raJesu.
33. O Ishe, regai avo vanondiseka vatuke kupupurira kupupura kwangu, muzita raJesu.
34. Hari yese yakaipa, kubika zvinhu zvangu, kubatira moto, muzita raJesu.
Hari dzose dzehuroyi, dzinoshanda kwandiri, ndinounza kutonga kwaMwari pamusoro pako, muzita raJesu.
36. Iwe inzvimbo yangu yekuzvarwa, haungazove caldron yangu, muzita raJesu.
37. Guta rino mandinogara harizove gate rangu, 'muzita raJesu.
38. Hari imwe neimwe yerima, yakapihwa hupenyu hwangu, kuti iparadzwe nemoto, muzita raJesu.
39. Hari yega yega muhari, uchishandisa kure kudzora hutano hwangu, bhuroka muzvidimbu, muzita raJesu.
40. Simba rese, richidana zita rangu mune chero caldron, dzika pasi ufe, muzita raJesu
Previous nyayaNenjodzi dzemunamato wePfungwa Kuti Uparadze Nheyo Dzakaipa
inoteveraMinamato Yekurwisa Mukurota.
Minamato Pamusoro Pouroyi naJezebheri
Minamato Ichimisikidza nekuchiva kwenyama
30 Munamato wekukunda Zvipingamupinyi
Kunamata Points YeRusununguko